Abavelisi beelayiti zezibane ze-UV kunye nabaxhasi | China UV isibane germicidal isibane Factory
35W UVC ozone yelifu G ...
Isibhedlele esiphathwayo ...
Uyilo olutsha 35W UV iintsholongwane ...
36W eziphathekayo 254nm ozone UV ...
Isibane se-germicidal ultraviolet light ozone sterilization lamp
Isibane se-Ultraviolet ozala inzalo esine-253.7nm ye-UV inokuyiphelisa intsholongwane (Covid-19) ngoko nangoko, inokuphelisa neebhaktiriya kunye neentsholongwane, zikhuselekile kwaye zilungele, zizisa ubomi obusempilweni kuwe.
I-35W ye-UVC iOzone Ultraviolet Germicidal Lamp Quartz Izibane
SiyiKanfur senza izibane ze-UVC zokucoceka amagumbi amakhulu, amagumbi amancinci, kunye nomphezulu. Phila ubomi ngokulawulwa kwezococeko. Iimveliso zeGermicidal UVC zabantu kunye namashishini ngokufanayo.
Isibhedlele isibulala-zintsholongwane Isibane esibulala iintsholongwane
Isibane seOZone esingama-36W / 60W i-Ozone esinolawulo olukude oluvela eKanfur sinokubulala iintsholongwane, intsholongwane, iintsholongwane, sinokuhlangabezana neemfuno zokubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane kubomi bemihla ngemihla kunye nokukhusela impilo yakho kunye nosapho lwakho.
I-36W / 60W isibane sokubulala iintsholongwane esinolawulo olungenazingcingo
I-110 V / 220 isibane se-UV isibane se-disinfection isibane sokulawula kude kude nodonga, ixesha lesithathu lamagiya, ukulibaziseka kwemizuzwana eyi-15 ukuqala ukukhusela umzimba wakho. UV ozone isibulala-zintsholongwane isibane, zonke-ngeenxa nzala, ugcine kude kwintsholongwane kunye neebhaktiriya.
Isibane sokubulala iintsholongwane se-ultraviolet sinokuphelisa iintsholongwane, intsholongwane kunye nezifo, ezisetyenziswa kakhulu eKhaya, eSikolweni, esibhedlele, ehotele, edlala indima ebalulekileyo kwintsholongwane kubomi bethu bemihla ngemihla.
Isibane sokubulala iintsholongwane se-UVC sinceda ukubulala iintsholongwane, ii-virus, i-allergen, kunye nokubumba ngokufanelekileyo. Yindlela yemichiza yokuhambisa ucoceko engenazintsholongwane kwi-360 ° ukunceda ukudala indawo yokuhlala ekhuselekileyo ngokulula.
Uyilo olutsha lwe-35W UV ukukhanya kwe-disinfection ukukhanya kwenzalo yangaphakathi
SiyiKanfur siyile nje isibane esitsha se-35w UV sokukhanya kwe-UV, kunye ne-Aluminium alloy bracket, iqokobhe le-ABS, i-UV kunye ne-ozone yokubola kabini, yenza imeko esempilweni yasekhaya.
Isibhedlele esiphathwayo isibane se-ultraviolet isibulali magciwane
35W isibane sokubulala iintsholongwane esiphathwayo se-UV, i-UV enamandla kunye ne-Ozone yokudibanisa
coca umoya kunye nomphezulu ngaphakathi kwegumbi ekhaya okanye kwindawo yokusebenza.